स्मार्ट टेलिकमद्वारा सिमकार्ड खरिदमा थप सुविधा प्रदान - Nature Khabar Complete Nature News
नेपालको तेस्रो ठूलो टेलिकम कम्पनी स्मार्टले सिमकार्डको खरिदमा थप रु. ४० प्रदान गरेको छ । स्मार्टको सिमकार्ड खरिदमा प्राप्त हुने विद्यमान सुविधाको साथ थप रकम प्राप्त गर्न सकिने छ ।
रु. ९९ मा सिम खरिद गर्नुहुने ग्राहकले १० मिनेटको टक टाइम, १० एस एम एस, २०० एम बि डाटाको साथ रु. ५० मेन व्यालेन्सको साथमा अतिरिक्त रु. ४० समेत गरी मेन व्यालेन्स प्राप्त गर्नुहुने छ ।
स्मार्टले यस अघि रिब्रान्डिङ्गको साथ “इट्स फ्रिडम ” भन्ने नयाँ योजनाहरु प्रस्तुत गरेको छ । यस योजना अन्तर्गत हरेक सिमकार्डको खरिदमा वा रिचार्जमा डाटा, भ्वाइस, एस एम एस मा अतिरिक्त सुविधाहरु प्राप्त गर्न सक्नुहुने छ । साथै २९ रुपैयाँमा ५०० एम बि डाटा, ९० पैसा प्रतिमिनेट भ्वाइस, तथा ५० पैसा-एसएमएस (सरकारी कर बाहेक) एवं अझ न्यूनतम शूल्कमा अन्तर्राष्ट्रिय कल गर्न सकिने सुविधा पनि योजनामा समावेश गरिएको छ ।
काठमाडौंमा फोर जी को समूह अन्तर्गत स्मार्ट ले न्यूनतम शुल्कमा विभिन्न फोर जी डाटा प्याकहरु उपलब्ध गराउँदै आएको छ । प्रयोगकर्ताहरुको सुविधा एवं आवश्यकता बमोजिम ठूलोदेखि सानो साइजमा डाटा प्याकहरु उपलब्ध गरिएको छ ।
स्मार्ट सिम तथा अन्य सेवाहरुको लागि स्मार्टले तोकेका विभिन्न ग्राहक सेवाकेन्द्रहरुमा सम्पर्क गर्न सकिने छ । स्मार्ट सेन्टरहरु लब भवन – कुमारी पाटी, रुद्र भवन– पुतली सडक, आर एन भवन – सूर्य विनायक, भक्तपुर तथा अरविन्द कम्प्लेक्स – न्यू रोड पोखरामा रहेका छन् ।
आम नेपालीहरुमाझ सूचना तथा सञ्चारको सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्य सहित स्मार्ट सेलको स्थापना गरिएको हो । नेपाली नागरिकहरुलाई सूचना तथा सञ्चारमा सहज एवं गुणस्तरीय पहुँच पु¥याउने यसको लक्ष्य रहेको छ ।
स्मार्ट सेल १ जुलाई २००८ मा स्थापना भई नेपालका दुर्गम क्षेत्रहरुमा सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । यसले २०१३ मा एकीकृत इजाजत ९गलषष्भम ष्अिभलकभ० प्राप्त गरेको छ । दक्ष एवं कर्मठ कर्मचारीहरुको साथले गर्दा दुरसञ्चारको क्षेत्रमा स्मार्टसेल हाल नेपालको तेस्रो ठूलो कम्पनीका रुपमा स्थापित हुन सफल भएको छ ।
स्मार्ट टेलिकम प्रा.लिले आफ्नो नेटवर्कलाई क्रमशः नेपाल अधिराज्यभर विस्तार गर्दै आएको छ । यसै सिलसिलामा कम्पनीले आफ्नो फोर जि सेवा काठमाडांै, ललितपुर, भक्तपुर तथा पोखरामा प्रदान गरिसकेको छ